Oovimba abangahlelanga- iNombolo ye-1 yeBhokisi yaseYurophu
22 UTshazimpuzi 2021
IBoxen247.com Akohlulwanga	Ibhanti leMestizo, wbc, IBhunga lezeManqindi yeHlabathi	0
Namhlanje e-villa Charra de Toluca entle, i IBhunga lezeManqindi yeHlabathi, Unobhala weNkcubeko noKhenketho kuRhulumente wase-Mexico kunye noManyano lweMibutho yaseCharros kaRhulumente waseMexico, wenze isikhumbuzo ngoMeyi 5 “IMestizo Belt”USaul Álvarez noBilly Joe Saunders bazokuphikisana ngoMeyi 8 kwibala le-AT & T eArlington.
Inkcazo-ntetho iqale ngomboniso oqaqambileyo okhokelwe ngu-Queen of the Union of Charros Associations of the State of Mexico, iqela lezomkhosi kunye ne-charros, apho bekubonakaliswa kobuhle obugcwele ngumfuziselo waseMexico.
Emva kwemiboniso eliqela nokwamkelwa ngokufudumeleyo nguNobhala weManyano yeMibutho yaseCharros kaRhulumente waseMexico, u-Aquilino Salgado Monroy, mzuzu wonke umntu ebewulindile ufikile, yiyo ke loo nto, phakathi komdaniso wesintu ongakholelekiyo, ibhanti entle yeMestizo ityhilwe. Ukusuka kwisandla sentshatsheli yangaphambili Humberto Gonzalez kunye noKumkanikazi we-Union of Charros Associations, uCarla Daniela Estrada.
Yenziwe ngesali yesithathu kunye neengcibi zaseToluca, eVaney Flores Martínez kunye noRaúl Pérez Carmona, owachaza ukuba lo msebenzi wobugcisa uphefumlelwe nguCharrería, obunye bobutyebi bezenkcubeko boRhulumente waseMexico ophumelele udumo olukhulu kunye neengcambu eMexico, ukususela ngo-1880.
Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba iCharrería-ebhaliswe yi-UNESCO njengeLifa leMveli leNkcubeko engabonakaliyo ngo-2016- luphawu lwendalo yonke yaseMexico ngezinto zayo, amaxabiso kunye nemisebenzi, ephinde yavuselelwa kwaye yahlengahlengisa isizukulwana emva kwesizukulwana. iphumelele isigxina sayo kunye nokubekwa kwayo njengenye yezona zibalaseleyo eMexico.
UVianey noRaúl, abasebenza malunga neeyure ezingama-300, bachaza ukuba kweli bhanti, kufuneka kwenziwe iinkqubo ezintathu, kuqala umsebenzi wesikhumba, obhekisa emsebenzini nakwidayi yesikhumba esisebenza njengesiseko, emva koko kukuqhwabana ukurhangqwa kwamanani esikhumbeni, ukuze ubenako ukuwaphawula kwaye ekugqibeleni ukuhonjiswa okwenziwa nge-pita okanye i-ixtle fibers, kunye neenaliti ezikhethekileyo.
Ngaphakathi kwesi siqwenga sihle, senziwe ngesandla sifumana amanani abonisa i-4 ye-9 charro luck ethi:
Cala a Caballo: ibandakanya ukubonisa ukufundwa kwehashe.
IiManganas ngehashe: kubandakanya ukuntshula intambo, ukujija imilenze yangaphambili yehashe kunye nokugqibela ngokumbeka phantsi, konke oku ngelixa ekhwele ihashe.
Manganas ngeenyawo: iquka iintyatyambo intambo, ukujija imilenze yangaphambili yehashe.
Ukukhwela ihashe: equka ukukhulisa imazi ngokumkhwela de ayiqhele le nto.
Ukongeza, kunjalo, uhombiso lweklasikhi okanye "i-ramada" kunye namanani abonisa isithethe samahashe. Isiko sebhanti senziwe nge-obsidian, ngeli xesha ngesinxibo segolide, ukunika udumo olukhulu kubugcisa baseMexico.
Ku-Mongameli we-WBC uMauricio Sulaimán, kulilungelo ukuba ibhanti engumfuziselo yomzimba yenzelwe eyona mihla ikhethekileyo eMexico (ngoMeyi 5 nangoSeptemba 15) ngeyona miqondiso ibalulekileyo yeenkcubeko zethu ezahlukeneyo, kwaye iibhanti zesikhumbuzo ngamabhaso awaphumeleleyo Iimbethi manqindi ezilwa kule mihla ikhankanyiweyo, oko ke kuyila isiko lomdlalo wamanqindi ngokuqaqambisa imihla emibini eyi-100% yomdlalo wamanqindi kwaye abalandeli balinde ngomdla.
Umongameli we-WBC uvakalise ukoneliseka okukhulu, ngokwazi ukubona ubungangamsha beMexico ngale bhanti ibandakanya zonke iinkcukacha isithethe esihle se-charrería; Uye wathi umphumo wokugqibela ungaphaya kwento ebeyicinga, kuba ubuhle bayo kuphela sisiphumo somsebenzi owenziwe ngentliziyo.
Uye wabulela ngokubanakho ukubakho kulo msitho umhle kangaka kwaye wakwazi nokubona umboniso wemidlalo yesizwe, eyile charrería.
Masikhumbule ukuba kude kube namhlanje kukho iibhanti ezikhunjulwayo ezi-8: i-Huichol 1 kunye ne-2, i-Maya 1 ne-2, i-Chiapaneco 1 kunye ne-2, iMazahua, i-Otomí kwaye ngoku obu bubuhle bebhanti leMestizo.
Umboniso weMestizo Belt wawuzele ziinkwenkwezi, kubandakanya neentshatsheli zangaphambili uHumberto González, uPipino Cuevas, uCarlos Zárate, uRafael Limón, kunye nentshatsheli yangaphambili uGuadalupe Martínez kunye no-Irma García kunye no-Ibeth Zamora.
20 UTshazimpuzi 2021
IBoxen247.com Akohlulwanga	UDemetrius Andrade, U-Liam Williams, Williams kunye noAndrade	0
U-Liam Williams wayenekhaya lokukhumbula njengoko wayefika eWales emva kokuba ephumelele isihloko sakhe sehlabathi UDemetrius Andrade.
U-Williams (23-3-1, 18 KOs) wenze umzamo okhaliphileyo kodwa waphulukana nesigqibo ku-Andrade (30-0, 18 KOs) njengoko babebangisana ngesihloko se-WBO middleweight eFlorida ngoMgqibelo.
Ngelixa isenokungabi sisiphumo esifunwa nguWelshman, abahlobo bakhe kunye nosapho baqinisekisa ukumbonisa inkxaso eninzi ekubuyeni kwakhe, into awayevuya ngayo.
Williams wathi: “Ibiyinto entle yokugoduka. Khange ndisifumane isiphumo endisifunayo kodwa oku kuye kwadambisa iintlungu. Andiziva ngathi ndiza kuthatha inyathelo elininzi kakhulu ngoku.
“Ndiyakholelwa ukuba uDemetrius ngoyena ubalaseleyo kwiintshatsheli ngaphandle kukaCanelo. Kufuneka ndimnike ityala. Ndiyazi ukuba ndimnike intonga kulwakhiwo kodwa andinanto ngaphandle kokumhlonipha-ungumgangatho.
“Ndiyazi ukuba ndinzima. Wonke umntu uyazi ukuba ndinzima kwaye ndingathatha umpu olungileyo. Ndithe xa ndisihla ndacinga nje ukuphela kosuku ndithathe umfanekiso ococekileyo apha, ndithathe eyona shot inayo kwaye khange indigcine phantsi, ke andoyiki nto.
“UDemetrius yintshatsheli yomlo. Ulunge ngakumbi kunokuba bendicinga ukunyaniseka kuwe-umtyibilizi ngaphezu kokubonakala kwakhe kumabonwakude.
"Khange ndikwazi ukuhamba ngokubhekisele kwimbumbulu zomhlaba kunye nokususa indibaniselwano yam kuba bendikhe ndambetha kwakanye - ndimenzakalisile amatyeli aliqela ndiziva - kodwa ebephumile ndingekayazi kwaye andinakukwazi ukwenza imali kuyo."
22 EyoKwindla 2021
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	Alexander Povetkin, UDillian Whyte, Kutheni Forte vs Povetkin 2	0
Bonke abakumgca wokudlala kwakhona, eGibraltar kulo Mgqibelo uzayo ngoMatshi 27th kwi-blockbuster phakathi kukaDillian Whyte no-Alexander Povetkin.
Ixesha lokugqibela e-Matchroom Fight Camp e-Brentwood, eNgilane, nge-Agasti 22nd Kunyaka ophelileyo, bekujongeka ngathi uDillian walibetha ikhadi lika-Alexander. Ulawule ngentsimbi yokuvula, ebeka iRussia phantsi kabini kwisine. Kodwa emva koko uAlexander, osoloko ebeka amakhadi akhe etafileni, wayeka ukudlala ubuso be-poker, kwaye yaba yiRussia Roulette yesihlanu.
UDillian wafikelela kwelungelo, u-Alexander waphosa ijab yasekhohlo, wabuyela umva kancinci emva koko wenza i-ballistic yasekhohlo. I-BOOM kunye ne-Dillian`s WBC isihloko seThutyana sasihambile ngephanyazo kwaye ke naye, wabotshwa ngeentambo. Wayephume ngaphandle, ethe tyaba emqolo, ke usompempe akazange azikhathaze ngokubala. I-WBC Diamond Belt nayo yayilungiselelwe ukubanjwa, ke uAlexander wayifumana nayo. Umsindo omkhulu!
Omabini la madoda anento efanayo. Ngamnye wabo wamiswa ngu-Anthony Joshua kumjikelo wesixhenxe. UDillian, woyisile i-AJ kumlo wokuzonwabisa, kodwa emva koko weza ngokungathandabuzeki kuye, ngexesha ledabi lesihloko saseBritane esingenamntu. Wonzakele okokuqala, uDillian wabetha ngamandla okwesibini nakwesithathu ukothusa u-Anthony. Kodwa i-AJ yaphinda yazola yaza indlela yajika. Ilungelo elikhulu elafika kwitempile kaDillian kwindawo yesixhenxe lazikhathaza izivamvo zakhe emva koko wabanjwa nge-crunching ekunene eyayihamba nayo eyayimthumele ngeentambo kwaye wayengu-KO`d.
UAlexander wabethwa ngesando ngesixhenxe ngu-AJ. U-Anthony wenzakaliswe luhlu olukhulu olufutshane olushiye umjikelo wokuvula kunye nezinye ezimbalwa zokulandela, njengoko iRussia ivala umgama kwaye yaya kusebenza. Ngokukhawuleza u-Anthony wafunda izifundo ezibini ezibalulekileyo. Ibhokisi ekumgama igcina ukuhamba, njengokuma kunye nokurhweba kunye noAlexander kuhlala kubulala. Okwesibini, gcina iglavu yakho yasekunene ukuya kwicala lobuso bakho, ukuze uzikhusele kwaye uphambukise loo magwegwe anamandla asekhohlo kunye nezinto ozifunayo, ezilungele ukulwa.
Sebenzisa ukuphakama kwakhe kwaye ngakumbi ukufikelela kwizibonelelo, u-AJ ukwazile ukukhetha ngakumbi uAlexander emva koko wahamba ngendlela eyenzakalisayo. Kweso sixhenxe sibi, u-AJ wambamba ngelungelo kwaye nangasekhohlo, eguqula idosi ukuze ambeke kumzabalazo. UAlexander ngesibindi waphakama, kodwa imilenze yakhe yaya ngasentshona nasemazantsi. Wayephumile ngeenyawo kwaye usompempe emsindisile, ukubetha kwangoko kwangoko kakhulu, kunokubetha ngenqindi emva kwexesha.
UWladimir Klitschko wasebenzisa ubuchule obufanayo ukulawula uAlexander, embetha phantsi okwesibini nakathathu kwesixhenxe, ukukhusela ngempumelelo i-WBA Belt yakhe, yi-UD ebanzi kakhulu. Oku kungqina enye inqaku. Ukunkqonkqoza uAlexander Povetkin yinto enye. Ukumgcina phantsi yenye into.
UAlexander owayekade eyintshatsheli ye-WBA ngokwakhe, unerekhodi entle njengepro. Kwimfazwe engama-39, i-36 iphumelele, i-25 KO`s, ilahleko ezimbini kunye nomzobo omnye. Kodwa, eneminyaka engamashumi amane ananye ufumana into encinci kwizinyo. Ukanti ngomlo onjengaye, into yokugqibela elahlekileyo… yingqindi yakhe. Ikhonkco lasekhohlo yidynamite emsulwa kufutshane. Ilungelo linamandla kakhulu. Ubhontsi uzwane kwaye unikwe isiqingatha sethuba unako kwaye uyakufezekisa ukonakaliswa kunye nokonakaliswa.
Phambi kokuba abe ngumpetha, uAlexander waphumelela i-European Amateur Championship ngo-2002 nango-2004. Ngo-2004 waphumelela iGolide kwii-Olimpiki, zonke zazinzima kakhulu.
UAlexander wafumanisa ukuba une-Covid 19, kwaye ke ukuphindwaphindwa kukaDillian kucwangciselwe uNovemba 21st yamiswa. Kananjalo, kuba iinyanga ezintathu kubonakala ngathi azonelanga ukuba uDillian achache kwi-KO enzima ngolu hlobo. Ngoku ulunge ngokupheleleyo, uAlexander uzimisele ukungqina ukuba uyakwazi ukuhambisa kwaye enze olunye uloyiso lwe-KO olumangalisayo kwiDillian.
Umdala wama-31 uDillian uneminyaka esithoba kuno-Alexander. Irekhodi lakhe limi kwimilo engama-29, i-27 iphumelele, kubandakanya i-18 KO`S kunye nelahleko ezimbini. Mde kwaye unzima kunomRashiya, kodwa ucotha. Ukusukela okoyiswa, wayenomdla wokubuyela eringini kwaye azikhulule ngokuphumelela u-KO. Ukukhawuleza okungakumbi ngesantya esincinci!
Nje ukuba umlo uqale, u-Dillian uya kuba wenza kakuhle ukuba abe nomonde, awugcine kumgama ophakathi ngokujingxela, ukubetha kunye nokubetha ngokubetha uAlexander, ukuze ungahambisi phambili, isitayile se-buzzsaw esihlaselayo. Hlala uhamba, sukuma kwaye uthengise kwaye ngokwenza njalo ufunde isifundo. Ibhokisi ye-puncher, endaweni yokurhweba, eyenza amashumi amahlanu / amahlanu anike kwaye uthathe umngcipheko.
Elona qhinga liphezulu likaAlexander kukusika umgama, ungene ukuze ukhuphe umbane wakhe omfutshane. Ukuqhubeka nokucinezela, ngokunyathela kude. Nje ukuba afumane isantya sesantya uye abe yingozi kakhulu kwaye uhlala enganqandeki. Nokuba sisiphi na isandla esinokukukhupha, kodwa ikhonkco lasekhohlo sisiginitsha yakhe ekhethekileyo yobusuku obumnandi obuyintloko.
Ubudala bunokusebenza ngokuchasene "noSasha." Akasayi kuba yinkukhu yasentwasahlobo, kwaye oku kuhamba ixesha elide, kokukhona umahluko wobudala uya kubonakala ngokungathandabuzekiyo, kunye nokufumana kuye.
Kwinqanaba le-heavyweight, amandla amakhulu amakhulu anokutshintsha nayiphi na into kwistroke. Njengoko isitsho njalo, awusoze uyibone inqindi ekufumanayo. Nangona kunjalo, i-uppercut yasekhohlo yayingenabungozi. UDillian uzibeka ngendlela eyingozi, ukuba abethwe.
Umbuzo ngoku, ukuba ufundile ngokwenene, ulumkile kwaye uya kuhlala engaphezulu lee kunokuba ingalo ikude. Kananjalo ... ngaba uya kuba neentloni kwaye ahlasele, okanye ayibeke ecaleni, njengobusuku obubi? Ukuchacha ngokwasemzimbeni nangokwasemzimbeni kwi-KO kuhlala kulula kunokuphilisa ngokwengqondo. Musa ukuqhwanyaza!
Ngamnye unako ukubetha ngenqindi nzima, bobabini behlile. Omnye wabo waphakama kabini ukuyigqiba okokuqala ngeenxa zonke. Kwakungoko kwaye ngoku. Akunakulindeleka ukuba uhambe umgama.
Bhalisa kwisiteshi sethu esitsha seYouTube ukuqala kungekudala ngeendaba zamanqindi kunye neziphumo, ukuhleba kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje kwikhonkco lomfanekiso apha ngezantsi:
I-Soares vs Solis & Pintor vs Castaneda ngo-Epreli 1 uSonora, eMexico
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UAlan Solis, UAntonio Soares, UKendo Castaneda, UMauricio Pintor, IPintor vs Castaneda, I-Soares vs. iSolis	0
I-RJJ Boxing kwi-UFC FIGHT PASS® ibuyela eMexico okokuqala ngo-2021 ngoLwesine, ngo-Epreli 1st - akukho ziqhulo zika-Epreli zobuDenge-eziboniswe nguRoy Jones, Omnci IPolideportivo Centenario, eLos Mochia, eSonora, eMexico
Isibini sokulwa kwesihloko seLatino siza kubonisa ikota yeembethi manqindi ezinesiphiwo kumnyhadala kunye nokudibana, ezinye iimilo zilayishwe ngetalente ngokunjalo. Isenzo siya kusasazwa bukhoma kwaye ngokukodwa kwi-UFC FIGHT PASS®, Inkonzo yobhaliso lwedijithali ekhokelela kwihlabathi kwimidlalo yokulwa, ukuqala nge-10 pm ET / 7 pm PT. Ukubhalisela i-UFC FIGHT PASS, nceda undwendwele www.ufcightpass.com.
“Siyakuthanda ukunyusa eMexico kunye nomhlobo wethu, umgqugquzeli U-Emanuel Romo (Ukunyuswa kukaDe La O), ”u-RJJ Boxing CEO / umseki-mbumba UKeith Veltre utshilo. “Ngaphandle kwamathandabuzo lo ngumboniso kaRJJ ogqwesileyo eMexico. Igcinwe ukusuka phezulu kuye ezantsi, kubandakanya imilo emibini, kunye nokuboniswa kweenkwenkwezi ezininzi ezinokubakho kwikamva. ”
Intshatsheli ye-World Boxing Organisation (WBO) UAntonio "Paulinho" Soares (I-11-1, i-8 KOs), elwa ngaphandle kweBrazil, ukhusela isithsaba sakhe ngokuchasene nomchasi wakhe waseMexico, UAlan “Lachorro” Solis (12-0-1, 7 KOs), kwi-10 ejikelezayo yentloko. Umbango waseBrazil ngokuchasene neMexico ngokuqinisekileyo uya kushushu ngaphakathi kwiringi.
Kumsitho we-8 ojikelezwe ngokudibeneyo, iBhunga lezeManqindi yeHlabathi (WBC) welterweight UMauricio “Trompas” Pintor (23-3-1, 14 KOs), waseMexico, uzakukhusela isihloko sakhe ngokuchasene neSan Antonio UKendo “Tremendo” Castaneda (17-3, 8 KOs), owayesakuba yintshatsheli ye-NABA superweightweight. UPintor ngumtshana weHolo yeNzara kunye neqela-le-2 leentshatsheli zeHlabathi ILupe Pintor.
Umthandi fan waseMexico ULuis "Koreano" Torres (I-10-0, i-7 KOs), i-WBC yoLutsha yesilivere esine-lightweight titlist, ithatha umntu oyingozi welinye ilizwe UJose "Cuate" Paez (I-13-1-1, i-10 KOs) kumlo ojikelezayo osisi-8. I-Torres vs.Perez yimpazamo yokuphelisa kunye nokuphumelela okuphumeleleyo kumlo wokuqala Uthotho lomdlalo wamanqindi weNdebe yeHlabathi ukuqala ngoJuni.
Ukungafezekiswa kweCuban super welterweight Yoelvis "La Joya" Gomez (3-0, 3 KOs), uhlala ngaphandle kweGuatemala, unyuka ngokubhekisele kwinkcaso esemgangathweni kwi-8-roumd bout ngokuchasene ne-Mexican knockout artist U-Luis "Desarmador" uPina (20-4, 15 ii-KOs). I-puncher yamandla enobuchwephesha, enobundlongondlongo, i-2-ntshatsheli yentsha yase-Cuba u-Gomez ungunyana we-1980 we-Olimpiki yegolide. UJose Gomez.
Ikwacwangciselwe ukuba ilwe kwi-undercard, ngaphandle kwe-UFC YOKULWA IPASI, sisithathu seembethi manqindi esekwe eLas Vegas kwi-4-rounders ngokuchasene nabachasi ekufuneka bezimisele: UKevin Urrutia (1-0, 1 KO) kunye nepro-debuting Yarida Bustillos, kunye ne-super bantamweight UAndy Beltran (1-0, 1 KO).
Ngale mini: UMuhammad Ali woyisa uZora Folley ngo-1967
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UAli ngokuchasene neFolley, Muhammad Ali, UZora Folley	0
Matshi 22, 1967
Ngalo mhla kwimbali, emva phaya ngo-1967, u-Muhammad Ali wayikhusela ngempumelelo intshatsheli yakhe ye-heavyweight ngokoyisa umntu wakowabo uZora Folley ngokunkqonkqoza kwimijikelo esixhenxe eMadison Square Garden, eNew York.
Usompempe yayinguJohnny LoBianco. Abagwebi yayinguFrank Forbes kunye noTony Castellano.
Ukulandela lo mlo, u-Ali wahluthwa ilayisensi yakhe ngokwala ukuba yinxalenye yomkhosi oxhobileyo wase-United States of America, kwi-Vietnam War. Wayekwincopho yomsebenzi wakhe wobugcisa kwaye emva koko waphulukana ne-3 yeyona minyaka yakhe intle. Nangona kunjalo, waba ngumzekelo kwimbali yezentlalo, ezopolitiko kunye nezemidlalo. UAli waba yintshatsheli kwakhona ngo-1974 ngokoyisa uGeorge Foreman wodumo.
Ukujonga ndawo: Amateur Lightweight Amelia Moore
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UAmelia Moore	0
Akukho kwibhokisi yamanqindi eye yafika lula kwi-2020 USA Boxing Iqela lemiQinisekiso yeOlimpiki engenye elula UAmelia Moore, oyise imiqobo emininzi ukuze abe yimbethi manqindi ebalaseleyo namhlanje.
Inzalelwane yaseMaine, u-Moore oneminyaka engama-31 ubudala waya e-US Naval Academy e-Annapolis, eMaryland iminyaka emibini, ngokuzithandela eshiya apho ngenxa yezizathu zempilo kunye nezakhe.
"Ukukhupha ibikukukhetha kwam," utshilo uMoren. “Andazi ukuba ndingaphi, ndisempilweni, ngaphandle komdlalo wamanqindi. Indincedile. Kwakungekho ziikona zokusika. Ndatyhala ndifuna ukufumana okungakumbi malunga neCrohn's. Ndidinga ukufumana iimpendulo, hayi ezokucwangciswa kwebhendi ezazizanywa ngoogqirha.
“Andizisoli. Ndinxibe iflegi ngendlela eyahlukileyo ngoku (emele i-US njengembethi manqindi yamanye amazwe). Ndiyakholelwa ekwenzeni eyona ilungele wena. Mhlawumbi ndingaba sisibane somnye umntu. ”
UMore Moore uqaphele ukuba kwabhengezwa ngo-2009 ukuba umdlalo wamanqindi wabasetyhini uza kongezwa kwiMidlalo yeOlimpiki ngo-2012.
“Umdlalo wamanqindi wawuludidi (kwabasetyhini) ukuqala kwam ukuba nomdla kumdlalo wamanqindi,” utshilo uMoren. “Ndiyakhumbula ndisiva (eU.S. Naval Academy), 'Bendingazi ukuba siqeqesha amanqindi amanenekazi apha.' Kwakufuneka ubeke ibhokisi, uqubha okanye ulwe kwisikolo samabanga aphakamileyo, kodwa akukho mntu kweli qela lam wayenokulwa nam, okanye kwezinye izifundiswa zenkonzo ezinje ngamadoda. Ndandi feisty. Ndithe enkosi ngokungabinambono. ”
Ukuqeqesha kwi-Naval Academy yase-US, u-Moore wayeza kungena ekhampasini abaleke iimayile ezimbalwa ukuya emotweni yakhe, aqhubele kwindawo yokuzivocavoca yomdlalo wamanqindi emva koko abuyele kwiziko lemfundo.
"Ndityhalelwe ukufumana umqeqeshi wam wesiseko," uqhubeke watsho. “NgoFebruwari ka-2015, ndafumanisa UThomas Longley, uSr. yiyo loo nto ndiyimbethi manqindi. Ndikwindawo yaseBeltway xa ndingaqeqesheki eColorado Springs okanye kwiitumente. ”
Ukongeza ekubeni yimbethi manqindi ebalaseleyo, u-Amelia usebenza ngokusisigxina njengomgcini zincwadi zemali kwizibhedlele zaseColorado ezisingatha uxolelwaniso. Ngenxa yokuba esebenza kude, uyaziqeqesha, akhuphisane, kwaye ahambe ngaphandle kweziphazamiso kuqeqesho lwakhe, kodwa kufuneka asebenze kuba uzixhasa ngemali.
Eyaziwa njengembethi manqindi eyintloko, u-Amelia uziqhelanisa nemeko esesandleni, ethatha indawo ekrelekrele yokubetha ngaphandle kokubethwa, eyona nto iphambili kumdlalo wamanqindi.
Amagqabantshintshi ngomsebenzi wakhe oqinisekileyo wokuzonwabisa othabatha amawonga aphezulu kwi-2018 Boxam Tournament, kunye nemidlalo yegolide kwi-2017 Elite National Championship kunye ne-2017 National PAL.
"Ukuma eqongeni kwiBoxam Tournament kusandikhuthaza," wongeze watsho, "kwaye iSpain yayintle.
Moore, ngubani enye indawo URashidi Ellis, uneenjongo ezicacileyo eziqala ngokuphumelela kwi-2020 USA Boxing National Championship, emisiwe ngenxa yobhubhane we-COVID-19 ukusukela ngoDisemba odlulileyo ukuya nge-Matshi 25 -Aprili 3, eShreveport, eLouisana.
Moore uphawule wathi, "Ndifuna ukuphumelela aba Bantu beLizwe kunye neembasa kwiNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo ngasekupheleni konyaka."
Kunzima ukukholelwa ukuba umdlalo wamanqindi wabasetyhini uyinxalenye yeMidlalo yeOlimpiki ukusukela ngo-2012. U-Amelia Moore ngumlandeli womkhondo ozinikele kwezemidlalo encede ekuphuculeni imbeko kwihlabathi jikelele kumanqindi angamakhosikazi.
Imfuno yabalandeli i-El Gallo vs.I-Chocolatito III phakathi kwengxabano
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	El Gallo vs Chocolatito III, IGonzález vs Estrada, UJuan Francisco Estrada, URomán González	0
Ngokuhamba kweentsuku, amagqabantshintshi amaninzi kunye nokuphikiswa kwisigqibo esinempikiswano se-WBA kunye ne-WBC Super Flyweight kwitumente yokulwela u-Juan Juan "El Gallo" Estrada wase-Nicaraguan Román "Chocolatito" González, wenze abalandeli bamanqindi Ihlabathi liqala ukucingela malunga nento enokwenzeka kumlo wesithathu phakathi kwamagorha amabini, eya kuthi yaphule umlinganiso we-1-1 obhaliswe kwiirekhodi zawo.
Ngokweengxelo ezenziweyo kwakamsinya emva kwengxabano (esele ingumgqatswa we "Fight of the Year"), ebibanjelwe e-American Airlines Centre eDallas, eTexas, umlo wesithathu uzokwenzeka ekupheleni kuka-2021, mhlawumbi eCalifornia. Oku, ubuncinci, yile nto u-Briton Eddie Hearn, uMlawuli we-Matchroom Boxing, watsho phambi kweendaba.
U-Estrada noGonzález balwa okokuqala kwiminyaka esi-8 neenyanga ezine ezidlulileyo befumana iwonga le-WBA Light Flyweight ebibanjwe yi-Central American, intshatsheli yamaxesha amane kwaye ngokungathandabuzekiyo wayengomnye wabalweli ababalaseleyo kwihlabathi namhlanje, abathe abo baphumelela uloyiso oluncinci kumanqaku.
Umlo owawubanjwe ngoMgqibelo ophelileyo ngomhla we-14 eDallas waphawulwa ngokutshintshiselana ngamanqindi, uninzi, ngokutsho kukaCompubox, lwalu-2,529 1,212, apho ophumeleleyo wadubula i-314, edibanisa i-26 (i-391% yokusebenza), ngokuchasene ne-30 (115 %) ibethwe yile ivela eManagua. Ezo manani ziphawula ubuninzi besahlulo seepawundi ezili-52.163 (4,662 kilograms). Amanani anje, ongezelelwe kulawo omlo wabo wokuqala, zizonke i-XNUMX punches eziphoswe ngaba babini, isixa nje esimangalisayo nesothusayo.
I-RUNGVISAI: ILANDLE ENDLELENI
Ngokunqoba kwakhe, umlwi wasePuerto Peñasco, uSonora, owayekhusela isihloko sakhe se-WBC, wabeka irekhodi lakhe leminyaka eli-13 kwindandatho kwi-42, 28 nge-KO, kunye neelahleko ezintathu, enye eya eGonzalez; omnye ngesigqibo esichasene nePhilippines u-Sor Rungvisai nge-2/26/18, kwaye lowo woyisileyo ngamanqaku ngoJanuwari 26/19; kwaye enye ngokuchasene nomntu wasekhaya u-Juan Carlos Sánchez kumanqaku e-Meyi ka-2011, awathi wamkhupha ngo-Disemba ka-2019 kwimidlalo ephindayo. Kwelakhe icala, "uChocolatito" unama-50 aphumeleleyo, ama-41 ngu-KO, eneengxaki zokulwa noWisaksil Wangek, owaziwa njengoSrisaket Sor Rungvisai (2) ngo-Matshi 18/17 ngamanqaku, omnye nge-TKO4 ngo-Septemba wonyaka omnye kwaye, Ngokucacileyo, lo wabandezeleka kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngokuchasene no-Estrada.
Sifunde amanqaku amaninzi ngalo mlo wakutshanje, esiwuhloniphayo, siwuchaza “njengeyona milo ibalaseleyo embalini”. Ngokuthozama, asizibaxi izinto ngolo hlobo. Ngokwenene kwakungumlo olunge kakhulu kwaye unzima kakhulu, ugcwele imvakalelo, nokuba isenzo kunye nolawulo olutshintshanayo. Kumanqaku ethu obuqu, sasinomtsalane ku-114 ngemijikelo eyi-6 yaphumelela kwaye i-6 yaphulukana kumacala omabini-ngokuthandabuza okuthile kumjikelo omnye okanye komnye, uninzi lwazo lusondele kwaye kunzima ukufumana amanqaku-, ngedraw ebeya kufaneleka umvuzo womzamo wokuqina wabalwi ababini ngokungathandabuzekiyo abahloniphanayo kwaye, ke, belumkile. Kodwa enyanisweni siyacinga (uxolo kwabo bakholelwa ngenye indlela) ukuthi "ibingomnye wemilo ebalaseleyo embalini" kukubaxwa, ukutsho nje okuncinci. Ewe, bobabini aba balwi benze umzamo olungileyo, balwa nzima yonke imijikelo eli-12. Kodwa, siyakholelwa, zange bayibeke yonke inyama kwi-grill, njengoko besitsho kwimlo weenkunzi, kwaye kunjalo bavuza ngokufanelekileyo abalandeli ababehlawulela amatikiti abo, behlanganisene kwindawo, kwaye babembalwa kunokuba bebeza kuba bhubhane wayengekho endleleni.
Akukho kwanto singayithetha, kodwa ukubuyela ekuqaleni kweli nqaku xa besichaza ukuba, okwangoku, umhlaba wamanqindi ulindele ukubhengezwa kwetrilogy esele ibhaptiziwe phakathi kweGallo eyayicula kwi-AAC kunye ne "Chocolatito" ngubani, ngesiphumo, wayefana namanzi ashushu.
I-trilogy elindelekileyo, kufanelekile ukongezwa, inelitye elisendleleni elinegama layo: uSrisaket Sor Rungvisai (50-5-1, 41 KOs), oye waboyisa bobabini kwaye ngubani oza kuba ngumchasi olandelayo we-Estrada umlo osisinyanzelo. Ilitye elikhulu kunye nesiporho esoyikekayo endleleni, esinokonakalisa ipati kuzo zombini "iGallo" kunye ne "Chocolatito". Kwaye kubalandeli.
ITor "Intaba" iBjornsson yokujongana noAlex Simon kuMboniso
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UAlex Simon, Bjornsson vs Simon, Intaba, UTor Bjornsson	0
UTor Bjornsson uzakuba nomboniso wakhe wesibini wokulwa kamva kulo nyaka, njengoko esiya kulwa nombane ophethe amandla waseAustralia ojike walwa noMMA uAlex Simon.
Umlo uya kuqhubeka ngoMeyi, njengoko uTor engena kumava abaluleke ngakumbi ngaphambi komdlalo wakhe wenqala kunye no-Eddie Hall oligorha ekuhambeni konyaka.
UTor uye waba ngomnye wamadoda abonakalayo emhlabeni kule minyaka idlulileyo, emva kokuphumelela iNdoda eliQinisekileyo yeHlabathi ka-2018, oyena mntu uQinisekileyo weHlabathi ka-2018, u-2018 ukuya ku-2020 uArnold Strongman Classic kunye neNdoda eliQinisekileyo e-Iceland minyaka le ukusukela ngo-2011 ukuya ku-2020. ngokudlala uGregor 'weNtaba' uClegane kuthotho lweHBO Game Game of Thrones.
Umlo phakathi kukaThor noSimon uza kusasazwa ngqo kwii-coresports.ihlabathi, kunye no-Thor emva kokusebenza emva komboniso wakhe noSteven Ward ngoJanuwari.
USimon ngumntu oQhelekileyo weAustralia, oye waphumelela kakhulu ekuphakamiseni amandla, ebeka iirekhodi ezininzi, kubandakanywa nokuphakamisa i-squat, i-bench press kunye ne-lifting.
Oko ebeguqukele kwimidlalo yokulwa, ekhuphisana kwi-kickboxing nakwi-MMA, kwaye uya kubonelela uTor ngethuba lokulwa nomntu oneempawu ezifanayo kwiHolo.
Iindaba ezingakumbi malunga nomboniso phakathi kukaThor noSimon ziya kubhengezwa kungekudala.
U-Akeem Ennis Brown vs Sam Maxwell uhlehlisiwe
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	Akeem Ennis Brown, Brown kunye noMaxwell, USam Maxwell	0
Umlo ocwangcisiweyo wangoLwesihlanu phakathi kuka-Akeem Ennis Brown kunye noSam Maxwell ngelishwa umisiwe emva kokuba uBrown wonzakele kuqeqesho.
Indoda eyaziwa ngokuba 'yiRiiddy Riiddy Riival "bekufanele ukuba ikhusele izihloko zayo zaseBritane nezaseCommonwealth ezingasindiyo kuMaxwell kungquzulwano lwabalweli abangoyiswanga, kodwa umlo ngoku awuzukukwazi ukuqhubeka kule veki.
Umnyhadala wangoLwesihlanu weQueensberry Promotions kwiCopper Box Arena usazokubona uSam Gilley ongoyiswanga mngeni kuDanny Ball weWBC International Silver welterweight isihloko, ngelixa inkwenkwezi ephakamayo uDennis McCann ebuyile emdlalweni, njengoko ethatha uLuis Moreno.
UFowler Wadiliza iFortea kwaye wagcina i-WBA-International Belt yakhe
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	U-Anthony Fowler, IFowler vs. Fortea, UJorge Fortea	0
U-Anthony Fowler ukhusele i-World Boxing Association (WBA) yeWelterweight isihloko nge-KO ejikeleze u-Jorge Fortea ngexesha lomlo wabo owawuse-Wembley Arena, eLondon.
I-Briton ibonakalise ukongama kunye nolawulo kumceli mngeni waseSpain ukubanga uloyiso oluvakalayo. Ujikelezo lwesithathu lwalulolwasekhaya kwaye okokuqala lwaqhagamshela i-jab eyamangalisa uFortea kwaye yamthumela kwibala. AbaseSpain baphakama ngobunzima kwaye bafumana isandla sasekunene kuFowler owaphinda wamphinda wawela phantsi ukuze i-KO igqitywe emva kokubala kosompempe abali-10.
I-Fowler ayigcinanga nje ngokubonakalayo kulo mlo kodwa ibonakalisile ukuba ikulungele ukujongana nemiceli mngeni kwaye ifuna isihloko sehlabathi. Umphumi-mkhosi oneminyaka engama-30 wenza ukhuselo lokuqala lwebhanti yakhe yommandla kwaye ngokuqinisekileyo usendleleni eya apho.
Inzalelwane yaseLiverpool ngoku inerekhodi ye-14 iphumelele, ilahleko ezi-1, kunye nee-11 ze-KOs, ngelixa iFortea iphuculwe yaza yaphumelela i-21, ilahleko ezi-3, ukuzoba enye, kunye nee-1 ze-KO.
IBillam-Smith iphumelele isihloko se-WBA-Continental ngokuThimba iDucar eWembley
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UBillam-Smith noDucar, UChris Billam-Smith, UVasil Ducar	0
UChris Billam-Smith uphumelele itayitile yeWorld Boxing Association (WBA) Continental Cruiserweight ngokuphumelela ngamxhelomnye ukuphumelela uVasil Ducar ngoMgqibelo eWembley Arena eLondon, eNgilane.
Amakhadi amajaji ayengama-99-90, 99-90 kunye no-97-92 ukunika u-Billam-Smith uloyiso, owayephezulu kulo lonke idabi kwaye waphumelela ibhanti elinamakhulu amabini eeponti.
Umphumi-mkhosi waseNgilani oneminyaka engama-30 wayephethe iCzech ukusuka ekuqaleni ukuya kuthi ga esiphelweni kwaye waphumelela umlo wakhe wesithathu ngokulandelelana wokunyuka kwizinga eliphezulu kunye nokulwa okungcono kwikamva.
Irekhodi likaBillam-Smith linempumelelo ezili-12, ilahleko e-1, kunye nee-10 ze-KO. Kwelakhe icala, iDucar yayiphumelele i-9, ilahleko ezi-4, umzobo omnye, kunye nee-1 ze-KO.
UArtur Beterbiev Halts Adam Deines eMoscow
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UAdam Deines, UArtur Beterbiev, I-Beterbiev vs.Deines	0
Umzobi weBoks obalaseleyo akazange abaphoxe abalandeli bakhe, kuba u-Artur Beterbiev wase-Russia, kwibhola yakhe yokuqala kwiinyanga ezili-17, wakhupha u-Adam Deines kumjikelo we-10 ukugcina i-WBC kunye ne-IBF ye-heavyweight izihloko zehlabathi ngoMgqibelo eMegasport Arena eMoscow.
I-Beterbiev (i-16-0, i-16 KOs) yaqhuba ngokufanelekileyo kwi-TKO yakhe ka-Okthobha u-2019 ngaphezulu kwe-Oleksandr Gvozdyk, umdlalo owomeleza indawo yakhe njengoyena mntu ulula kakhulu. Imihla emithathu yokulwa - enye ngokuchasene noMeng Fanlong kunye ezimbini ngokuchasene neDeines - zahlehliswa, ngaphambi kokuba uBeterbiev ekugqibeleni abuyele eringini.
U-Beterbiev ugcine isikhundla sakhe njengentshatsheli ekuphela kwayo yomdlalo wamanqindi nge-100 yeepesenti yenqanaba lokunkqonkqoza, ebuyela ekhaya kwisizwe awayesimele kwi-Olimpiki ka-2008 nango-2012.
U-Beterbiev waqhekeza ii-Deines (19-2-1, 10 KOs) ngentambo yasekhohlo kumjikelo wokuvula, enkqonkqoza iJamani kwibala, ixesha ngaphambi kwentsimbi. Isigulana esizinzileyo sinxibe phantsi koxinzelelo lwe-Beterbiev, ngokuthe ngcembe sinxibe ii-Deines, ezazikwindlela yokubuyela umva uninzi lomlo, emva komjikelo wesine.
Ke kumjikelo we-10, isleyhamham sokhohlo sokuloba sabeka iiDeines kwakhona. Ikhonco le-Deines langena ukuze lisindise i-southpaw enesibindi kwaye isihlwele safumana ukunkqonkqoza ababenqwenela kakhulu.
I-Russian Pavel Silyagin iphumelele isihloko se-WBC seSilivere esiPhakathi
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	Azizbek Abdulgofurov, UPavel Silyagin, Silyagin vs Abdugofurov	0
U-Pavel Silyagin wase-Russia uphumelele isihloko se-WBC Silverweight esoyise u-Uzbek Azizbek Abdugofurov ngesigqibo esivumayo kumlo ozonwabisa ngoMgqibelo kwinto ebiyidlala kwikhadi le-Top Rank Boxing elikhokelwe ngu-Artur Beterbiev vs Deines eMegasport Arena eMoscow.
U-Lanky Silyagin usebenzise amandla akhe okufikelela ixesha elide kwaye watshintsha ngobunono phakathi kwesandla sasekunene kunye ne-southpaw, ehambisa amanqindi kuzo zonke ii-angles ngokuchasene no-Abdugofurov.
Kwakungumlo onzima kwaye nganye nganye yayinegazi impumlo yomnye. Kodwa yayinguPavel owayesebenzisa ngempumelelo uxinzelelo oluzinzileyo ngakumbi.
Abagwebi babenayo i-120-108, i-119-109 kunye ne-119-109 ye-Silyagin (7-0, 4 KOs), i-27, yase-Russia, eyaziwa ngokuba yi "Stylish Assassin."
21 EyoKwindla 2021
UJackie Nava woyisa uKarina "Bella" Fernández eTijuana
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UJackie Nava, UKarina Fernández, INava vs.Fernandez	0
UJackie Nava wabuyela ekhaya ngokuphumelela, kwaye waqalisa ngempumelelo imibhiyozo yeminyaka engama-20 eyimbethi manqindi eqeqeshiweyo, ngokoyisa uKarina "Bella" Fernández ngesigqibo ngamxhelo-mnye.
Yayingoyena mlo uphambili wekhadi elivezwe nguZanfer ngalo Mgqibelo, eGrand Hotel iTijuana.
Kumlo wokuzonwabisa, okhuphisanayo, osoloko usenziwa, "iAztec Princess" uNava (38-4-4, 16 ko's) isantya kunye nomgama olawulayo, odibanisa ngakumbi nangcono, ehlasela ngokufanelekileyo nangokungaguquguqukiyo, esenza ibhokisi ekhaliphileyo "uBella" Fernández ( 25-6-1, 4 ko's) ababenamaxesha amahle kwaye babengezela ngakumbi ngejab.
UJackie ubonise isantya kunye nokuchaneka, ukudityaniswa kokuhlangana ukuya kuthi ga kwiqoqo leepunch kwaye kubonise imeko yakhe entle.
Ekupheleni kwemijikelo eli-10, uJackie Nava wayephumelele ngokungenakuphikiswa ngesigqibo esifanayo, kunye namakhadi amanqaku amajaji amathathu awaphumelele amanqaku ngo-100-90, 99-91 no-97-93.
Ibhokisi yaseBritane uLee Noble RIP
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	U-Lee Noble	0
Kubuhlungu ukunika ingxelo yokusweleka kwe-WBC ye-Honorary Champion Champion u-Lee Noble.
Umlo wamanqindi wase-Bhritane u-Lee Noble wayesakuba ngumdlali we-English welterweight ophumelele itayitile, kunye neminyaka esi-8 yomsebenzi othathe inxaxheba kuma-47. Ngo-2014, emva kokoyisa Lithuanian Kiril Psonko, wafumana iindaba ezivela koogqirha bomhlaza.
I-WBC ivakalisa ukubabaza kwayo kunye nentlonipho yalo mlo unesibindi u-Lee awukhaliphileyo. Ngomoya kunye nokuqina kwendoda enkulu ngokwenene, walwa nesi sifo soyikekayo, zonke ii-intshi zendlela. Kwaye sincoma kakhulu, sathiya igama likaLee Honorary Champion. Ekhaliphile kwaye engakhalazi, uLee wasibonisa indlela yokulwa ngomzekelo.
I-Seniesa "Super Bad" i-Estrada iphumelele kwaye yiNew WBA 105 lbs. Intshatsheli
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UAnabel Ortiz, Estrada vs. Ortiz, ISeniesa Estrada	0
Kumdlalo odlamkileyo, inkwenkwana yaseMelika ezelwe e-East Los Angeles, uSeniesa "Super Bad" u-Estrada waba liQela le-World Boxing Association le-105 lbs. Intshatsheli emva kokubhukuqa u-Anabel "Avispa" Ortiz waseMexico ngesigqibo esamkelekileyo kwimijikelo elishumi. Umlo wawuyinxalenye yomsitho omkhulu eDickies Arena, eFort Worth, eTexas, eUnited States.
U-Avispa wayecebe ukuthatha umlo awuse kwindawo apho wayesazi ukuba angoyisa njani umlo wakhe; ngamanqindi amabini nangaphandle, ukugcina umgama kunye nokufumana okuncinci kumgama omfutshane. Nangona kunjalo, indlela enjalo yayingasebenzi ngokuchasene nesantya sebhokisi enzima njenge-Estrada. Umjikelo wokuqala uqale ngesigqibo sikaSuper Bad sokugcina isihloko njengoko ebesitsho kwinkomfa yoonondaba: “ngoku lixesha lam eli”.
Zombini iimfazwe zibeka yonke iarhente yokusebenza. Kumjikelo wesibini, umlweli waseMexico waya kwinqwelo xa uSeniesa ewela umnqamlezo ochanekileyo olungileyo ukuya esilevini. U-Ortiz wakwazi ukuphinda afikelele esiphelweni somlo, ekwazi ukubonisa amava akhe kuqhushumbo olungonelanga ukoyisa inzala encinci yaseMexico enomnqweno onamandla wokulawula kwiindidi ezininzi.
Ngomsebenzi weenyawo, etshintsha rhoqo unogada wakhe, kunye nokulingiswa kwesithixo sakhe uRoy Jones Jr. ekhuselekile endaweni yakhe ngokuhambisa umboko wakhe, intloko kunye nokuphosa amanqwanqwa ngaxeshanye, uEstrada wabonisa ukusebenza kwakhe kakuhle kwicandelo elincinci kuye kwaye wangqina kwimeko entle yomzimba yokwahlulahlula.
Ke, iSuper Bad ihlala ingoyiswanga ngokulwa kwe-19, kunye nee-8 KOs. Umnini we-WBA Interim Flyweight kunye neebhanti zeMinimumweight, emva kokudlala kakuhle, ubhengeze ukuba ngoku ufuna ukubuyela kwicandelo leLight Flyweight ukujongana no-Yesenia Gomez okanye u-Yesica Bopp wase-Argentina.
U-Lawrence Okolie utyumza i-Krzysztof Glowacki yeWBO kwisihloko sehlabathi
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	I-Krzysztof Glowacki, U-Lawrence Okolie, I-Okolie vs Glowacki	0
U-Lawrence Okolie utyumze uKrzysztof Glowacki ukuba atyeshelwe i-WBO Cruiserweight World Champion kumlo wakhe weshumi elinesithandathu e-The SSE Arena, eWembley, uhlala kwi-Sky Sports Box Office e-UK nakwi-DAZN e-US nangaphezulu kwamazwe neendawo ezingama-200.
U-Okolie ukhuphe umthwalo ophelileyo wokuwisa i-Glowacki yase-Poland kakhulu kumjikelo wesithandathu kwaye usompempe u-Marcus McDonnell uwususile umlo ukuze aqinisekise ukuthweswa kwe-World's new holder ye-Bhritane.
Umntu ongonwabanga oneminyaka engama-28 ubudala waseHackney wayexelise uTony Bellew, uDavid Haye noJohnny Nelson, ngaphambili ababephethe izithsaba zehlabathi kwiklasi ye-200lb,
“Andiqondi ukuba sele itshonile,” utshilo u-Okolie. “Kumnandi ukukuva usitsho. Ndonwabile. Kum, kungokukhululeka. Isakhono sele likho ngaphezulu konyaka. Ndonwabile ukufumana uloyiso. Ngoku nangonaphakade, ndiya kuba yintshatsheli yeHlabathi.
“Ndijonge nje ekwenzeni umdlalo olungileyo. Ndomelele kakhulu emzimbeni kwaye ndibetha ngamandla. Ndilunge kakhulu, kungoko ndinokuphumelela kwezi mpawu kwinqanaba elithile. Ndigxile kakhulu ekungangxamelini nakuphi na ukudubula kuba uyingozi kakhulu xa esenza izixhobo zokulwa kwaye unzima kakhulu. Iijabs zakhe zazomelele kakhulu, ke kuye kwafuneka ndibenobuchule bokugcina umgama. Yayikukusebenza kakuhle okucocekileyo.
“Bonke ababekwiNtshatsheli yeHlabathi yaseBritane ebendinqwenelela amathamsanqa andichukumisile - ndibakhwaza. Ukusuka kulo lonke uhambo endakha ndalwenza, ndiphulukana nabo bonke obo bunzima, ndithatha isigqibo sokuthatha umngcipheko, ukuba nabazali bam bandixhase ngemali xa ndingenakho ukufumana ibhasi iye kwindawo yokuzivocavoca ukuya kuqeqesho. Ukuyibona yonke ihlawulwa ngesihloko sehlabathi liphupha elifezekileyo- ungaze unikezele. Singaqhubeka nje ukusuka apha. Ndifuna ukuqhubeka ndizinyanzela ukubonisa ukuba ndingoyena mntu ubalaseleyo. ”
UJoe Cordina woyisile uFaroukh Kourbanov ngesigqibo esigqibeleleyo kwiringi yakhe ekudala ilindelwe.
Ngenye ijaji ebhengeze umlo wokuzoba, amanqaku angama-98-93 kunye nama-96-95 ayanele ukubona uCordina ebhalisa uloyiso lwakhe lwesi-12 oluthe ngqo kwizinga lobungcali.
UCordina ubonise iklasi yakhe kwisiqingatha sokuqala somlo we-super-featherweight ngaphambi kokuphela nanjengoko wanyanzelwa ukuba azinze amanqaku aphumeleleyo kumlo wakhe wokuqala ukusukela ngo-2019.
"Khange ndiyicinge ukuba isondele kwaphela," utshilo uCordina. “Ndicinga ukuba ukhethe umjikelo omnye okanye emibini, mhlawumbi emithathu. Ndonwabile kwaye khange ndiphume kwigiya yesibini. Ndimvumele ukuba asebenze amatyeli aliqela kuyo yonke imijikelo, mhlawumbi bekungafanelekanga ukuba ndibenayo. Ndifumene ishumi elilungileyo lokujikeleza ngaphandle kwayo kwaye yinto yokwakha kuyo. Ndiza kubeka ukusebenza okungcono kumlo wam olandelayo.
“Kwakungekho malunga nokuya phaya phandle kwaye uzame ukumvuthela aphume apho. Besisazi ukuba unzima, yiyo loo nto simkhethileyo. Zombini iilahleko zakhe zaziphambi kwam yayiyeeNtshatsheli zaseYurophu. Umkile amaxesha amaninzi, besisazi ukuba womelele. Sijikeleze phantsi kwebhanti lethu kwaye ndaziva ndimlimaza amatyeli aliqela. Wayemhle ngamanye amaxesha.
“Ndineenyanga ezili-16 ndiphumile eringini. Weza ukuphumelela kwaye yile nto bendiyifuna. Isandla siziva silungile, ndiyasishiya amaxesha ambalwa. Bendingafuni ukuyibaxa. UTony wandixelela ukuba ndivumele izithonga zibaleke yile nto ndiyenzileyo. Akufuneki ndibenangxaki ngesandla sam ngoku. Lixesha lokuba wakhe kuloo nto. Ukuba ndifuna ukuba yiNtshatsheli yeHlabathi, kufuneka ndidlule kubantu abanjengoKourbanov. Khange ndiphume giyeri yesibini. ”
U-Anthony Fowler ubhidlize i-Jorge Fortea yaseSpain nge-knockout engummangaliso wesithathu ukugcina i-WBA Intercontinental Super-Welterweight Title.
ILiverpudlian ilahle iFortea nge-jab eqinileyo kwaye emva koko yakhulula isandla esikhulu sasekunene kumgangatho oneminyaka engama-30 ubudala ukubala.
"Ndizimangalisile, andizukuxoka," utshilo uFowler. "Ndacinga ukuba iza kuya kumanqaku. Ndizidlala ngokwesiqingatha. Uye nje wajikeleza i-12 nge-Russian 18-0 killer, IBF No. 1. Ndibetha amanqindi kwinqanaba elisezantsi kakhulu. Ndingowokuqala ukuyivuma loo nto.
“Ndifumana ii-troll ezimbalwa ngamanye amaxesha endixelela ukuba ndiyimbethi manqindi kwinqanaba lesiNgesi Isihloko kwaye banyanisile, ayilotyala lam. Ndicela le milo mikhulu. Khange ndizifumane. Ndithe kuEddie, 'ndiphose kumlingane, masibone ukuba ndenziwe ntoni' Zama undiqhekeze kwaye masibone ukuba ndiqhuba njani.
“Uye wehla kwi-jab eqinileyo endothusayo ngayo. Ndeva uShane esithi, 'ungayikhawulezisi', kodwa bendisazi ukuba kusele imizuzwana elishumi ke ndicinge 'f * ck it'. Kwafuneka ndiphose ibhombu enye ubuncinci, ngethamsanqa ngokwaneleyo yafika. Wayengcono kunokuba ndandicinga ukuba uya kuba.
“Umjikelo wokuqala wawulungile kwaye kumjikelo wesibini wandibamba ngompu. I-jab yayihlala emhlabeni kodwa yayinobuqili. Ndiqale ukuphosa emzimbeni wakhe ukuze ndimnciphise. Ukugqitywa bekumnandi, bekusandla esihle esithe nkqo. Ndonwabile ukuhlala kwakhe phantsi; ibinokuba bubusuku obude ukuba.
“Kwakungase ndikhale kuloo msesane; kuthetha ukuba kuninzi kum. Umqeqeshi wam ukholelwa ngokunyanisekileyo kum kunam. Ndinamandla ezandleni zozibini kwaye ndinamandla. Mna noMetcalf ngumlo ongakholelekiyo. Ndiyazi ukuba uyayifuna; Ndimvile xa ethetha ngayo. Isixeko sonke sasiza kubhuza. Ndifake kuGarcia kwaye nam ndiza kumbetha. ”
Ithemba leCatford Featherweight uEllie Scotney wongeze uloyiso lwakhe lwesibini ngokufumana amanqaku aphumeleleyo kuMailys Gangloff waseFrance.
Umntu oneminyaka engama-23 ubudala wanika italente yakhe, ebamba iGangloff ngokudibanisa okuphumeleleyo kumanqaku amathandathu aphumeleleyo.
"Ngokuqinisekileyo ibingumlo wokufunda kum ngokuqinisekileyo," utshilo uScotney. “Ngokwesiqhelo kumlo wakho wesibini uza kubetha umntu ongezanga ukuphumelela. Wayengesosidenge; wayenemilo emihlanu. Ndafunda okuninzi kuloo nto kwaye kuninzi okungakha phezu kwayo. Ndiyabulela ngalonto.
“Wayenomsindo kakhulu yayingenguye. Unzima njengoko beza, kwaye ndicinga ukuba ndiza kuzuza lukhulu kuyo. Iya kundinika ukukhaba ngasemva. Ndinomsebenzi omninzi ekufuneka ndiwenzile, endithanda ukuwenza. Kusekude ukuba ndihambe.
“Ibingumhla wokuzalwa kwam kule veki, ndineminyaka nje engama-23, ndifuna ukuqhubela phambili kwaye ndiyazi ukuba ndiyifumene. Ngoku lixesha lokuqala ukuhambisa. Umdlalo wamanqindi wabasetyhini uya usomelela ngokomelela. Ndiyathemba ukuba ndingangena kwikhadi langaphantsi lenye yazo ezinkulu ngoMeyi. ”
UChris Billam-Smith wamlahla uVasil Ducar amatyeli amabini ngexesha lokuphumelela elinzima elambona ebanga isihloko se-WBA Continental Cruiserweight esingenamntu kunye nenkqubela phambili ukuya kwi-12-1 (10 KOs).
Umdlali okhuphisana neBournemouth, oqeqeshwe nguShane McGuigan, watyibilika uDucar ngesandla sasekunene kumjikelo wesine, emva koko wambuyisela kwitende lokudubula umzimba.
Kodwa umntu oneminyaka engama-31 ubudala waseCzech wadubula wabuyisa ngokudubula njengoko uBillam-Smith wayesebenzela isigqibo ngamxhelo mnye.
"Ndaziva ndikhululekile ngaphakathi ngalo lonke ixesha, naxa wayenemincili," utshilo uSmith. “Kwakulungile kum. Ndacinga ukuba ndiza kuba yindoda yokuqala ukumnqanda. Ndaye ndambeka phantsi amaxesha ambalwa, kodwa wayeyindoda elukhuni. Ukuba bendizakulinganisa ishumi, ngendizinike 6.5 okanye 7 kwishumi.
“Ndinokusebenza okuninzi kwindawo yokwenza umthambo kwaye ndinokuphucula kakhulu. Into ephambili yayikukufumana ukuphumelela. Ndiyifumene kwaye ndonwabile. Ndambetha nge-shot shot enkulu yomzimba, ndaziva ukuba iyatshona ngokwenene, emva koko ndamwisa entloko. Ebedipha kwaye bendizama ukumbetha ngaphezulu nje kwentloko yeiglavu zakhe. Abo baseCzech banzima kwaye yonke imbeko kuye.
Ngelishwa, khange ndifumane ukunqunyanyiswa, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuphumelela. Ndicime amatyeli aliqela ngexesha lomlo kuba ndiziva ndikhululekile. Ndizivumele izandla zam zivuzise mhlawumbi izihlandlo ezibini okanye ezithathu ngexesha lomlo kwaye undinqumle, kodwa andizange ndibethwe okanye ndonzakaliswe kwaphela. Ndabona yonke into isiza ukuze uhlale unento oyithathayo.
“Ngokuqinisekileyo kufuneka ndiphucule. Yayingumlo wam we-13 kwaye ndihlala ndiphucula yonke imihla eringini. Ndinombulelo ongazenzisiyo ngokuba namaqabane azinzileyo kunye nomqeqeshi obalaseleyo. Ndingathanda ukufumana umlo kaTommy McCarthy ngokukhawuleza. ”
IBethnal Green Featherweight URamla Ali ulawule u-Bec Connolly ngaphezulu kwemijikelo emithandathu, waphumelela i-60-55 kwikhadi likasompempe ukuya kwi-2-0.
Umlo wamanqindi owazalelwa eSomalia ubonakalise izakhono zakhe zeringi yeklasi kwibhola yokuvula, ephantse wamisa uConnolly ngohlaselo oluzinzileyo kumjikelo wesithathu ngaphambi kokugqiba amanye amanqaku aphumeleleyo.
"Ngaphandle kokuqaqamba kobuso bam ndonelisekile," utshilo u-Ali kwi-Matchroom. “Nokuba zithini izikali, ndikhuphe malunga nesiqingatha selitye. Ndilinganise-ngaphakathi njengababini beebhokhwe zokubaleka ukuze ndikwazi ukulinganisa ubunzima. Ndandiva umahluko wobunzima ngokuqinisekileyo, kodwa ndazama ukumvumela ukuba asebenzise ubunzima bakhe ngokuchasene nam.
“Ndizamile ukugcina iziko lendandatho kangangoko ndinako, ndenza njalo. Ndoneliseke nyani yindlela endenze ngayo. Unzima kodwa ndiyenzile. UJobi usoloko esithi awukwazi ukuzibetha iinyawo- kwaye uchanekile! Ndandihlala ndihamba ndisuka kwi-jab ephindwe kabini. Sisebenza kakhulu kwiinyawo, kwaye ndiziva ngathi ndenze kakuhle ngenyawo.
“Nguye owayenditsalela umnxeba esithi ufuna ukulwa nam. Sukujika ujike ukhalaze ukuba unezaziso ezimfutshane. Uyingcali, ukuba bendibiza umntu ngaphandle, bendiya kuba ndikulungele ngalo naliphi na ixesha. Uthe unesaziso seentsuku ezimbalwa. Andazi ukuba mandithini ngaloo nto.
“Wonke umntu uyoyika ngaphambi kokungena eringini kuba kuthetha lukhulu kuwe. Ufuna ukuzibonakalisa kwaye ufuna ukubonisa bonke abahlobo bakho kunye nosapho ababukele ekhaya ukuba ufanele ukubukela. Ufuna ukubeka ukusebenza kakuhle kwaye ulwe kakuhle. Umzuzu wokuba intsimbi ihambe kuyo yonke imithambo-luvo kwaye ndaye ndagqiba ekubeni ndenze umsebenzi. Iphupha leOlimpiki lisaphila kwaye ndisenethemba lokuhamba, kwaye ndinethemba lokukhuphisana. Ndisathembe ukuqhubela phambili kwikhono lam lobungcali. ”
U-Stretford u-Bradley Rea ugcine irekhodi lakhe elingabethwanga ngokumisa u-Lee Cutler ngaphakathi kumjikelo wokuvula ukuya kwi-10-0, (4 KOs) kumlo wokuqala wobusuku.
Ndikunye noRicky Hatton kwikona yakhe, amathemba aneminyaka engama-23 ubudala kuMiddleweight aphume aphuma kwiibhloko, ekothula imijukujelwa kulowo achasene naye evela eBournemouth.
Umntwana olawulwa nguSteve Wood ebephumile eringini ixesha elingaphezulu konyaka ngenxa yobhubhane kodwa akabonakalisanga zimpawu zerusi njengoko ebeka uCutler phantsi kathathu ngaphambi kokuba usompempe ashiye ukhuphiswano.
“Ndigqithile enyangeni,” Rea uxelele Igumbi lokutshatisa emva koko. “Kudala siseza. Yayiyinkampu ende; ziinyanga ezili-12. Kudala ndifuna ukubhoxa kwimiboniso enje ngobomi bam bonke. Ndiyathemba ukuba ndingafikelela kule miboniso ngokuthe rhoqo ngakumbi emva kwaloo ntsebenzo.
“Phambi koku ndinendawo zokumisa ezintathu kuphela, ngoko ndicinga ukuba andizukubetha kakhulu. Yinto ebesisebenza kuyo, ukutyala iinyawo zam. Bendi sebenza kumandla amancinci kunye nezinto zokufaka imeko ngelixa besinonyaka siphumile. Kube luncedo kakhulu kum ndicinga ukuba. Ndiziva ndomelele ngalo mzuzu,
“Ndandinenkampu enkulu. Kudala ndenzakalisa abantu enkampini. Bendisazi ukuba ndifike ndicocekile, ndingamenzakalisa. Andikhawulezi, ndisena-23 kuphela. Ndifuna ukuba kwimilo enje. Ekwakheni kulo mlo ndinento yokoyika endingenayo kwimilo yam yangaphambili. Bendisazi ukuba bendingekho kumdlalo wam ngesele ndilahlekile ngokuhlwanje. U-Lee ngumntwana olungileyo. Ndifumene nje iigiya ebendingazi ukuba ndinazo. Ndiyathemba ukuba kwimilo ezayo ndizakufumana ezingakumbi. ”
Imvakalelo yeVergil Ortiz ime uMaurice Hooker kwimijikelo esixhenxe
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UMaurice Hooker, I-Ortiz vs. Hooker, UVergil Ortiz Jr.	0
UVergil Ortiz Jr. uthathe olunye uloyiso olumnandi xa wayeka owayesakuba yintshatsheli eMaurice Hooker kumjikelo wesixhenxe we-welterweight showdown.
I-Ortiz (17-0, 17 KOs) yayijongeka intle ukusuka kwintsimbi yokuqala, amandla omhlaba adubula emva kokudubula kwamandla ukuba iHooker (27-2-3, 18 KOs) yayisokola ukujongana nayo.
Isiphelo sasisondele esiphelweni somjikelo wesithandathu, u-Ortiz efika phantsi kakhulu, kwaye ngelixa uHooker ekwazi ukubuyela ezinyaweni zakhe, ukugqiba kwakhe kwafika nje kwimizuzwana engama-30 ukuya kumjikelo wesixhenxe, no-Ortiz efaka elinye ithuba lokungqisha. .
Intshatsheli ye-WBO welterweight uTerence Crawford wayekweso sakhiwo ukuze abone ukubaleka kuka-Ortiz ngendlela engakholelekiyo, kwaye imvakalelo eneminyaka engama-22 yakwenza kwacaca ukuba angawuthanda lo mlo olandelayo.
UOrtiz Jr uthe: “Ndiyakholelwa kum kwaye ndicinga ukuba ndikulungele ukufumana isihloko. UTerence Crawford kunokwenzeka ukuba abe ngu- # 1 wepound-for-pound fighter emhlabeni, kodwa ndifuna loo mfazwe.
“Ndifuna ukubulela uMaurice ngokundinika eli thuba. Kwakungekho mfuneko yokuba awuthathe lo mlo. Ndivakalelwa kukuba ndinengxaki kwi-147lbs, ke ndimnika iipropu zokuba anyuke.
Ndizive ngathi ndenze kakuhle kakhulu phaya, kodwa kuhlala kukho indawo yokuphucula. Undibonisile ukuba womelele kwaye angathatha inqindi, kodwa bendisazi ukuba mandithini. Isicwangciso somdlalo besikukucothisa isantya kwaye ndiye ndathomalalisa. ”
I-Vergil Ortiz Jr. Yoyisa uMaurice Hooker kunye neziphumo ezigcweleyo zamanqindi ezivela eTexas
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	Alberto Torres, UAlex Martin, UAnabel Ortiz, UDustin Mde, UGeorge Rincon, UHector Valdez, UJairo Lopez, ULuis Hernández, ULuis Solis, UMarcelino Lopez, UMaurice Hooker, IOrtiz Jr. vs. Hooker, ISeniesa Estrada, UTristan Kalkreuth, UVergil Ortiz Jr.	0
IDickies Arena, eFort Worth, eTexas
UVergil Ortiz Jr. (17-0, 17 iiKO) W TKO 7 UMaurice "UMandla kaMo" Hooker (27-2-3, 19 zeeKO)
(Ubunzima be Welter)
Amanqaku okulwa: IHooker yayiphantsi kumjikelo 6. Wayephinde wehla kwakhona kumjikelo wesi-7 kwaye usompempe wawangxolisa umdlalo nge-0: 56 imizuzwana yaloo mjikelo u-Ortiz Jr.
ISeniesa "Super Bad" i-Estrada (20-0, 8 iiKO) I-PTS UD 10 UAnabel Ortiz (31-4, 4 iiKO)
(Isihloko se-WBA sabasetyhini abaSindayo)
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayengu-100-89 x2 kunye no-99-90 ngokuphumelela kwe-Estrada.
UMarcelino "Nino" Lopez (I-37-2, i-22 yeeKO) W TKO 5 UJairo "Doberman" Lopez (27-12, 18 iiKO)
Amanqaku okulwa: I-Lopez yehla kumjikelo wesi-2, 3, 4 kunye namaxesha amabini ewonke kumjikelo wesi-5, usompempe ekugqibeleni wamisa umlo ngo-1: 25 kumjikelo we-5 wokuphumelela u-Lopez.
UTristan Kalkreuth (8-0, 6 iiKO) W TKO 1 UDustin Mde (4-2-2, 4 zeeKO)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa yayingu-1: 18 kumjikelo wokuqala wokuwina u-Kalkreuth kwezobuchwephesha kumanqwanqwa 1.
UAlex Martin (20-3, 6 iiKO) I-PTS UD 10 ULuis Hernandez (21-1, 19 iiKO)
(Isihloko se-WBC Continental Americas Super Lightweight)
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayengu-100-90 x2 kunye no-99-91, konke ukuphumelela kwamanqaku kaMartin.
UGeorge Rincon (11-0, 7 iiKO) I-PTS UD 8 ULuis Solis (25-12-4, 21 zeeKO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-80-71 x2 kunye no-79-72, onke aphumelele amanqaku eRichon.
UHector Valdez (14-0, 8 iiKO) I-PTS UD 8 Alberto Torres (11-4-3, 4 zeeKO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-78-74 x2 kunye no-79-73, onke aphumelele u-Valdez ngamanqaku afanayo.
IBraian Manuel Suarez yoyisa u-Aviles ka-Yesu kunye neziphumo ze-Boxing ze-Santa Fe
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi, Akohlulwanga	UArmando Oscar, UBraian uManuel Suarez, UDiego Sebastian Cabrera, UYesu u-Aviles, UJose Angel uGabriel Rosa, ULeandro Ariel Fonseca, ULuciano Goiris, UMatias Ezequiel Herrera, UPablo Ezequiel Corzo, UPedro Jose Antonio Ojeda, ISuarez vs Aviles	0
ICentro de Convenciones Cosecha, Ibarlucea, iSanta Fe, eArgentina 19/3/21
UBraian uManuel Suarez (14-0, 13 iiKO) U KO 1 UYesu u-Aviles (9-4, 2KO)
(Umbutho wamanqindi weLizwe ongenamntu iFedebol Light isihloko esinobunzima obunzima)
UJose Angel uGabriel Rosa U KO 2 ULuciano Goiris
Amanqaku okulwa: Umlo wawucwangciselwe imijikelo emi-6.
ULeandro Ariel Fonseca I-PTS UD 6 UMatias Ezequiel Herrera
UPablo Ezequiel Corzo U KO 4 UArmando Oscar
Amanqaku okulwa: Umlo wawucwangciselwe imijikelo emi-4.
UPedro Jose Antonio Ojeda I-PTS UD 4 UDiego Sebastian Cabrera
Ukusasazwa / iTV: iTyC yeMidlalo yeTV
20 EyoKwindla 2021
UKatie Taylor ukuba azikhusele ngokuchasene ne-Amateur Rival Natasha Jonas
IBoxen247.com Akohlulwanga	Katie Taylor, UNatasha Jonas, UTaylor noJonas	0
Inkwenkwezi yaseIreland uKatie Taylor ukhusela isithsaba sakhe se-WBO Lightweight esingachazwanga ngokuchasene nembangi yakhe yantlandlolo uNatasha Jonas ngoMeyi 1 wekhadi eliyinxalenye yekhadi eligcweleyo elibonisa uDerek Chisora ​​ethatha uJoseph Parker. Zombini iimilo ziya kuba bukhoma kwiOfisi yeBhokisi yezeMidlalo eSky e-UK nakwi-DAZN kuzo zonke iimarike ngaphandle kwe-UK, i-Ireland, i-China, i-New Zealand ne-Samoa.
UTaylor (17-0, 6 KOs) woyise uJonas (9-1-1, 7 KOs) kwinqanaba lokugqibela lekota yokugqibela kwimidlalo yeOlimpiki yaseLondon ngo-2012 kwindlela yokuthimba imbasa yegolide yokuqala yaseIreland ehlotyeni. Esi sibini siza kudibana kwakhona phantse iminyaka elishumi ezantsi kumgca we-Taylor's WBC, WBA, IBF, WBO kunye neRing Magazine Lightweight World Titles emgceni.
Ukusukela oko babedibene okokuqala kwaba bafundi, uTaylor uqhubeke nokuzimisa njengowona mfazi ungoyena mntu ubalaseleyo kwiplanethi ngokuphumelela iiTayitile zeHlabathi kulwahlulo lweLightweight kunye neSuper-Lightweight kwaye uhlala engoyiswanga kulo lonke ukhuphiswano lobungcali. U-KT wagqibela ukubonwa edlula kwi-WBA yesinyanzelo kuMceli mngeni uMiriam Gutierrez ngomboniso ogqibeleleyo ngo-Novemba.
'U-Miss GB' wasondela kabuhlungu ekuphumeleleni isihloko sakhe sokuqala sehlabathi eneminyaka engama-36 ngehlobo lasehlotyeni xa wayesilwa nomdlalo omnandi kunye ne-WBC kunye ne-IBO Super-Featherweight Champion uTerri Harper e-Matchroom Fight Camp. Kwakungokokuqala ukuba abafazi ababini base-Bhritane bakhuphisane ngokuchasene nesihloko seLizwi, kwaye yonke into eyenziwayo yayisilwa ngaphezu kokuhlala kweso sihlandlo.
“UNatasha ubonakalisile kumlo wakhe wokugqibela ukuba usaqhuba kwelona nqanaba liphezulu ke ngumceli mngeni omkhulu kum kwaye ndijonge phambili kuwo,” utshilo uTaylor. “Umlo ekudala ubuzwa ngabantu kwaye olo luhlobo lwemilo ofuna ukuba yinxalenye yayo.
“Abantu basathetha ngomlo wethu kwii-Olimpiki zika-2012 kwaye ndicinga ukuba oko kube yinto evula amehlo ebantwini ngokubhekiselele kumanqindi amanina. Ndilindele omnye umlo onzima nge-1 kaMeyi kwaye ndijonge phambili ekuzikhuseleni ngempumelelo iiTayitile zam. ”
“Ndonwabe kakhulu ngokufumana umlo, ndenze ingxolo enkulu ngokungafuni ukwehla kwinqanaba okanye eklasini emva kokuzibeka kwinqanaba lehlabathi kumlo wam wokugqibela,” utshilo uJonas. “Ndiyazi ukuba uKatie lolunye uhlobo lwesilwanyana kuTerri Harper, kodwa ndiyakholelwa ngalo lonke ixesha ndicelwa ukuba ndinyuke, ndiyayenza. Ndithe ndifuna ukuba yintshatsheli kwaye nabani na oneminyaka eyi-130 ukuya kwi-140 wayekuzo, ndiyazi ukuba ndiyimbethi manqindi ekumgangatho wehlabathi kwaye ndingaphumelela iTayitile yeHlabathi.
“Ukusukela ngomzuzu uEddie endityikitya ngalo mlo ubusemakhadini. Mna noKatie saba nebali elihle elivela kwiiOlimpiki, kwaye sobabini singoovulindlela ngendlela yethu. Ndiyavuya ukuba iyenzeka kwaye ngumlo omkhulu kumdlalo wamanqindi wabasetyhini nowomdlalo wamanqindi waseBritane nowaseIreland. ”
UArtur Beterbiev Uyoyisa uAdam Deines kunye neZiphumo eziPheleleyo zeManqindi eMoscow
IBoxen247.com Akohlulwanga	UAdam Deines, UAlexander Besputin, Alexander Stepanov, IiKarpets zika-Artem, UArtur Beterbiev, Azizbek Abdulgofurov, I-Beterbiev vs.Deines, UElvin Akhundzada, UMncedisi weRojas, Khariton Agrba, UPavel Silyagin, URakhman Akhmethanov, UViktor Plotnikov, UVladimir Ivanov, UVladimir Mironchikov	0
Ibhotwe leMidlalo iMegasport eMoscow, eRashiya
UArtur Beterbiev (16-0, 16 iiKO) W TKO 10 UAdam Deines (19-2-1, 10 zeeKO)
(I-WBC / IBF yokuKhanya kweziTayile eziSindayo)
Amanqaku okulwa: U-Beterbiev wawisa ii-Deines ekupheleni komjikelo we-1. I-Deines yaphinda yehla kumjikelo we-10, ibetha ukubala kodwa ikona yayo yawangawangisa itawuli. Ixesha lokunqunyanyiswa yayingu-1: 34 ngesiphumo sokuphumelela kokumiswa kweBeterbiev.
UPavel Silyagin (7-0, 4 iiKO) I-PTS UD 12 Azizbek Abdulgofurov (13-1, 5 iiKO)
(Isihloko seWBC Silver Super Middleweight)
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayi-120-108, 119-109, 119-109 onke aphumelele u-Silyagin.
UAlexander Besputin (14-0, 10 iiKO) NC UViktor Plotnikov (33-11, 15 iiKO)
Amanqaku okulwa: Ukuphumelela kwasekuqaleni kwakuyimpumelelo yeBesputin emva kokuba uPlotnikov engaphumi kwikona kumjikelo wesi-3 kodwa watshintshelwa kungabikho khuphiswano njengoko iBesputin yavavanya ukuba inento engavumelekanga.
Khariton Agrba (5-0, 2 iiKO) W TKO 2 UMncedisi weRojas (13-4-2, 11 zeeKO)
Amanqaku okulwa: Umrhwebi wayikhupha nge-2: 30 kumjikelo wesi-2 yokuphumelela okumileyo kweAgrba.
UVladimir Mironchikov (3-0, 3 iiKO) W TKO 1 UElvin Akhundzada (4-6, 2 iiKO)
Amanqaku okulwa: U-Akhundzada wayephantsi kumjikelo 1 kunye nokuma kumisiwe phakathi komjikelo 1 & 2 wokuphumelela u-Mironchikov.
UVladimir Ivanov (4-0, 3 iiKO) W TKO 1 Alexander Stepanov (I-2-4, 1 KO)
URakhman Akhmethanov U KO 2 IiKarpets zika-Artem (21-15, 6 iiKO)
U-Lawrence Okolie woyisa i-Krzystof Glowacki kunye neziphumo zamanqindi ezivela kwi-Wembley
IBoxen247.com Akohlulwanga	U-Anthony Fowler, Yiba nguConnolly, UBradley Rea, UChris Billam-Smith, UEllie Scotney, UFaroukh Kourbanov, UJoe Cordina, UJorge Fortea, I-Krzystof Glowacki, U-Lawrence Okolie, U-Lee Cutler, UMailys Gangloff, I-Okolie vs Glowacki, URamla Ali, UVasil Ducar	0
I-SSE Arena, iWembley, eLondon, eNgilani
U-Lawrence Okolie U KO 6 I-Krzystof Glowacki
(Isihloko seWBO Cruiserweight)
Amanqaku okulwa: U-Okolie wayeyalele yonke indlela, ekugqibeleni wankqonkqoza iGlowacki kumjikelo 6. Ixesha lokumiswa yayingu-0: 46.
UJoe Cordina W IPTS MD 10 UFaroukh Kourbanov
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-96-96,98-93, 96-95 kwisigqibo esinqumle kuCordina.
U-Anthony Fowler U KO 3 UJorge Fortea
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa yayingu-3: 08 kumjikelo we-3. I-Fortea yabalwa ngaphandle kokuba intsimbi iye kwaphela kumjikelo we-3.
UEllie Scotney I-PTS UD 6 UMailys Gangloff
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-59-55 okuphumelela ngamanqaku angama-Scotney.
UChris Billam-Smith I-PTS UD 10 UVasil Ducar
Amanqaku okulwa: I-Ducar yayihleli kumjikelo we-4 kufutshane nentsimbi. Amanqaku angama-99-90 x2 kunye nama-97-92 okuphumelela u-Chris Bingham-Smith.
URamla Ali I-PTS UD 6 Yiba nguConnolly
Amanqaku okulwa: Inqaku likasompempe uBob Williams wayeneminyaka engama-60 ukuya kwengama-55 ukuya kuma-Ali ngamxhelo mnye ekuphumeleleni imijikelo emi-6.
UBradley Rea U KO 1 U-Lee Cutler
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa yayingu-2: 03 kumjikelo wokuqala wokunqoba kweRea. I-Bout icwangciselwe imijikelezo esi-1.
Ukusasazwa kweTV: DAZN, Sky Sports
UReggie Barnett Jr. Ukoyisa iDemarcus Corley kunye neBKFC Iziphumo ezivela eBiloxi
IBoxen247.com Akohlulwanga	Iimpawu zikaAdrian, AJ Adams, UBobo O'Bannon, UDavid Diaz, UDemarcus Corley, Jason Intlanzi, UKaleb Harris, UMelvin Guillard, Umsiki kaNowa, UReggie Barnett, UScott O´Shaughnessy, USpencer Ruggeri	0
IZiko loLuntu, eBiloxi, eMississippi
I-Bareknuckle Fighting Championship (BKFC) yeqela eliyintshatsheli elineminyaka engama-46 ubudala
UReggie Barnett Omnci. W TKO 4 UDemarcus "Chop Chop" Corley
Amanqaku okulwa: UCorley uthathe umhlala phantsi kwisitulo sakhe esikhokelela kwimpumelelo ye-TKO ka-Barnett Jr kumjikelo we-4.
AJ Adams U KO 1 UBobo O'Bannon
UKaleb Harris W TKO 1 Umsiki kaNowa
UScott O'Swekratshi W TKO 1 UMelvin Guillard
Jason Intlanzi W TKO 3 Iimpawu zikaAdrian
UDavid Diaz W MD 5 USpencer Ruggeri
USaul Sanchez woyisa uFrank Gonzalez kunye neziphumo ezigcweleyo zamanqindi ezivela eFlorida
IBoxen247.com Akohlulwanga	UAlberto Delgado, UFrank Gonzalez, UIsake Luna, UJohn Portal, UKenny Robles, UKristopher Berberich, UMaleik Montgomery, URichard Graham, USawule Sanchez, UZamy Larry	0
IBryan Glazer yoSapho yeJCC Auditorium eTampa, eFlorida
USawule "Irhamncwa" Sanchez (16-1, 9 iiKO) U KO 1 UFrank "Castigador" Gonzalez (8-2, 4 iiKO)
(VIsihloko se-WBA Fedecentro Bantamweight)
Amanqaku okulwa: UGonzalez wayephantsi kwamaxesha amathathu ngaphambi kokuba usompempe awugqibe nge-1: 47 kumjikelo wokuqala. USanchez ubanga isihloko seWBA Fedecentro bantamweight.
UJulio Solis (4-0, 4KO) U KO 1 UNicholas Collins (0-1, 0KO)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa lalikhona 0:35 yomjikelo 1.
UMarcus Willis (20-7-2, 6KO) I-PTS UD 6 UAaron Garcia (16-10-1, 11KO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-59-55, ama-59-55 kunye nama-60-54 onke aphumelele u-Willis ngamanqaku.
URichard Graham (2-0, 1KO) I-PTS UD 4 UAlberto Delgado (1-14-4, 1KO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-39-37, 39-37, 40-36 onke awokuphumelela ngamanqaku eGraham.
UZamy Larry (2-1, 2KO) U KO 1 UJohn Portal (0-1, 0KO)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa lalikhona U-1: 24 we-1 yomjikelo ophumeleleyo ka-Larry.
UKenny Robles (8-1, 3KO) I-PTS UD 6 UIsake Luna (5-3, 1KO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-59-55, 58-56 kunye nama-58-56 onke awokuphumelela ngamanqaku eRobles.
UMaleik Montgomery (9-0, 9KO) U KO 1 UKristopher Berberich (0-4, 0KO)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa lalikhona 0:59 yomjikelo 1.